Home Wararka Muxuu salka ku hayaa safarka uu RW Rooble ee Masar?
Ra’iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta u kicitimay magaalada Qaahira ee dalka Masar, booqasho aan horay loo shaaacin.
Socdaalkan wuxuu imaanayaa maalmo yar uun ka dib markii uu soo gabagabeeyay socdaal saddex maalmood qaatay oo uu ku tagay Kenya, kaasoo sida la sheegay su’aalo ka keentay Villa Somalia.
Inkastoo aan la xaqiijin karin ajandaha ugu weyn ee socdaalka Rooble ee Masar, haddana wuxuu ku soo beegmayaa xilli Soomaaliya ay ka dhacayso doorasho xasaasi ah.
Dhowr dawlad goboleed oo muhiim ah sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa durba u soo gabagabeeyay codbixinta senetarrada. HirShabelle waa maamulka wali aanan bilaabin xulista.
Balse layliga wali horyaala Rooble waa maamulida kuraasta Somaliland. Wakiilada gobolada waqooyi waxaa lagu doortaa Muqdisho maadaama maamulkooda uu sheegto madax-banaani.
7 -dii Ogosto, Rooble ayaa xafiiskiisa Muqdisho kula kulmay Danjiraha Masar u fadhiya Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Nasr, iyagoo ka wada hadlay xiriirka shacabka, labada dowladood iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashigooda.
Waaxda arrimaha dibedda ayaa sheegtay in Qaahira ay Muqdisho soo gaarsiin doonto talaalka looga hortago COVID-19 Ogosto 12 “si ay gacan uga geysato la-dagaallanka fayraska”.
Sannadkii hore, waxaa jiray sheegashooyin ah in Masar ay aad u danaynaysay inay saldhig millatari ka dhisato Somaliland, arrintaas oo ka caraysiisay xukuumadda fadhigeedu yahay Muqdisho.
Qaahira ayaa, sida ay wararku tilmaamayaan, waxay rumeysan tahay in saldhig noocaas ah uu ka caawin karto ballaarinta awoodeeda Geeska Afrika, taasoo ay ka soo horjeedo dowladda Itoobiya.
Sideedii bilood ee la soo dhaafay, Rooble wuxuu dhowr jeer safaro ku tagay meel ka baxsan Soomaaliya, taas oo sidoo kale dhalisay walaac laga qabo inuu go’aansado inuu ku biiro tartanka madaxtinimada bisha Oktoobar.